Clay Thompson - ehlasela "Warriors Golden State" ithimba wasemuva. Ukubambezeleka iyindodana edume basketball Michael Thompson owayephayona kuhlulekile kabili ukunqoba isicoco NBA ku 70-yalolucwaningo kwekhulu elidlule.
Klay Thompson wazalwa ngo-1990 futhi kusukela ebuntwaneni uthethe isinqumo sokuyisebenzisa ukudlula impumelelo zikayise basketball. Qala kwezemidlalo wakhe kungenziwa kubhekwe njengento 2008, lapho ethola umfana, ezemidlalo luthela, iziqu ngempumelelo esikoleni samaKatolika futhi wabhalisa e-University of Washington.
Esikhathini league umfundi Klay Thompson kudlalwa zonyaka ezintathu. Phakathi nalesi sikhathi, umdlali wakwazi iqhaza 98 okufanayo. Ekuqaleni, le nsizwa kwabonisa imiphumela ngempela isilinganiso. Ngakho, phakathi nomdlalo Thompson wenza iqembu lakhe i isilinganiso 12.5 amaphuzu emdlalweni ngamunye. Nokho, e-ngesizini edlule ithimba inyuvesi yakhe ukusebenza ngcono 21.6 amaphuzu ngesikhathi umdlalo.
Thompson intuthuko yaqashelwa by the club enkulu. Ngo-2010, ithalente abasha wathenjiswa inkontileka professional yithimba kobuholi NBA sika Golden State Warriors. Kakade ngenkathi kuqala yamakhonsathi nabalingani ezintsha umdlali ephethwe 10 ukufana ilandelana ukuletha amaphuzu ezingaphezu kuka-20 endaweni yengcebo leqembu lakhe siqu.
Klay Thompson - basketball ngubani nombhali amarekhodi eziningi abadlali abasebancane avele NBA. Ipumelelo wokuqala ezinkulu umdlali phambili lezemidlalo isibe umdlalo ngokuphumelelayo club kusukela Sacramento e DEBUT yakhe isizini. Khona-ke ngokuhamba ingxenye yesine ka Clay wakwazi nokwenza amaningi njengoba 37 amaphuzu. Thompson elandelayo irekhodi setha kakade ngekwata yesithathu, kokuba waqaphela isibhamu 13 esiyingini isitha zilandelana, ne 9 kubo babe yizinkulungwane-Imicibisholo emithathu ekhomba.
Kakade ukuvela third-sizini NBA Klay Thompson sathola isimemo eqenjini lesizwe le-United States. Ndawonye nabalingani kusuka kwamanye NBA abadlali club wakwazi ukuthi uzothatha indondo yegolide ku-FIBA World Championship, okwenzeka ngo-Spain ngo-2014. Lokhu kwakuwumnikelo ka-umfutho ezinkulu sokuthuthukiswa ukudlala kwakhe umsebenzi. Ngakho, ngo-2015 Thompson yena kuqala angiphendule emdlalweni we-NBA izinkanyezi.
Ngenkathi zamanje, Klay Thompson lalibonisa impumelelo entsha. unogada Shooting kukora 41 amaphuzu ngesikhathi kuqubuke impi phakathi kwamaqembu "Golden State Warriors" ngokumelene "Oklahoma City". Ngakho umdlali abasha kuvikelwe isimo wesine basketball emlandweni NBA, okuyinto kwaphawulwa kungekho engaphansi kwemine kweshumi isibhamu uphumelele Semifinals we playoffs. Ngasekuqaleni kwakunokwenzeka kuphela ezifana amakhosi waqaphela njengoba Lebron Dzheyms, Dzhordzh Gervin futhi Dzhulius Irving.
Okwamanje, umdlali kufanele credit yayo izinkomba ezilandelayo:
ukufana ukudlalwa NBA - 306;
isibalo amaminithi wachitha kusayithi umdlalo ngamunye - 32,2;
iphesenti hits yimpumelelo esiyingini imbangi - isilinganiso 44,3;
iphesenti hits enamaphuzu amathathu isibhamu - 41,8;
hit nge isigwebo - 84,6%;
inombolo isilinganiso rebounds umdlalo ngamunye - 3.1;
lemali isilinganiso ukusiza umdlalo ngamunye - 2.3;
inani lamaphuzu - isilinganiso 17.5 umdlalo ngamunye.
Klay Thompson, sibonga ukusebenza layo aphakeme, wasiza "amasosha" kusukela "State Golden" uwine ngempumelelo ubuqhawe kule sizini 2014/2015. Kunengi ngange 67 ukunqoba phiko avunyelwe iqembu ngaphandle kwezinkinga ukugwema izimbangi ngqo e inkomfa yabo futhi ukufinyelela playoffs chungechunge.
Esikhathini sokugcina, iqembu beqondiswa i Umqeqeshi wokuvelela entsha Steve Kerr kwakumelwe bahlangabezane nethimu "Cavaliers Cleveland". Ekugcineni, nganquma iwine Klay Thompson futhi Company, amaphuzu Imininingwane ochungechungeni 4: 2 esivuna "Warriors". Umsebenzi wakhe professional umdlali kuyaqhubeka kuze kube manje kule club.
Calcium gluconate ngesikhathi sokukhulelwa
Bazaar - a ... Okushiwo izwi, etymology. Ngokungafani emakethe asempumalanga